ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ပါ - Worldwide God of God Switzerland
ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို > ဘုရားသခင်ကိုချစ်ရန်တာတွေရပ်စဲဘယ်တော့မှ
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုချစ်ကြောင်းယုံကြည်ရန်အခက်တွေ့ကြောင်းသင်သိပါသလား။ လူတို့သည်ဘုရားသခင်အားဖန်ဆင်းရှင်နှင့်တရားသူကြီးအဖြစ်မြင်ယောင်ရန်လွယ်ကူသော်လည်းဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်သောအရှင်အဖြစ်မြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဖန်တီးမှုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဘုရားသခင်သည်သူ့အားဆန့်ကျင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ပြုလုပ်သမျှသည်ကောင်းလှ၏။ စကြာ ၀ inာတွင်သူ၏စုံလင်ခြင်း၊ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောမုန်းတီးမှု၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့သည်ဘုရားသခင်အားအရာရာကိုထိုနည်းအတိုင်းဖန်တီးသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။
မကောင်းမှုဟူသည်အဘယ်နည်း။ သို့သော်မကောင်းသောအရာသည်မူလကကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားအပါအ ၀ င်ဘုရားသခင်ဖန်တီးခဲ့သောအရာအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖန်ဆင်းခြင်းအလွဲသုံးစားမှုကြောင့်မကောင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ငါတို့အသက်ရှင်ခြင်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်ခြင်းထက်ဝေးရာသို့ပြောင်းရန်ဘုရားသခင်ပေးသောလွတ်လပ်မှုကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းအတွက်အဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုယ်ကျိုးစွန့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအနက်၊ အတိုင်းအဆမဲ့စုံလင်ခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးလုံးကောင်းမွန်ပြီးကောင်းမွန်သောအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများ၊ အပြစ်များနှင့်အမှားများကော။ ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာသွားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်အစားကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်ခြင်း၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုထိန်းသိမ်းသောအချက်၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံမှဝေးကွာသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်၊ ကိုယ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းများမှလမ်းလျှောက်သွားပါကသူသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမမြင်နိုင်ပါ။ သူ့ကိုကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စေသောတရားသူကြီးတစ် ဦး၊ ကြောက်ရွံ့နေသူတစ် ဦး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားနာကျင်စေရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အမှားများအတွက်လက်စားချေရန်စောင့်ဆိုင်းနေသူတစ် ဦး အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်။ ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ သူကအမြဲတမ်းကောင်းတယ်၊ ငါတို့ကိုအမြဲချစ်တယ်။
Er möchte, dass wir ihn kennen, dass wir seinen Frieden, seine Freude, seine reiche Liebe erfahren. Unser Heiland Jesus ist das Ebenbild von Gottes Wesen, und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort (Hebräer 1,3). Jesus zeigte uns, dass Gott für uns ist, dass er uns trotz unseres wahnsinnigen Versuchs, von ihm wegzulaufen, liebt. Unser himmlischer Vater sehnt sich danach, dass wir umkehren und zu ihm nach Hause kommen.
သားနှစ်ယောက်ပုံပြင်ကိုယေရှုပြောခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကမင်းနဲ့ငါလိုပဲ။ သူသည်သူ့စကြာ ၀ ofာ၏ဗဟိုဖြစ်ချင်။ သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကိုဖန်တီးလိုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူကသူ့အမွေမြေတစ်ဝက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသူလုပ်နိုင်သလောက်ဝေးဝေးပြေးထွက်သွားပြီးသူ့စိတ်ကြိုက်သာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနေထိုင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သူ၏အမွေအနှစ်များကိုမိမိအတွက်ပိုမိုအသုံးပြုလေသူခံစားခဲ့ရလေပိုမိုဆိုးရွားလာလေ၊
သူ၏လျစ်လျူရှုခံထားရသောဘဝ၏နက်ရှိုင်းစွာမှသူ၏အတွေးများသည်သူ့အဖေနှင့်သူ့အိမ်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ သူတကယ်လိုချင်တာအားလုံး၊ သူတကယ်လိုအပ်သမျှ၊ သူ့အားပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေသည့်အရာအားလုံးကိုဖခင်နှင့်အတူအိမ်တွင်တွေ့နိုင်သည်ကိုသူတိုတိုတုတ်တုတ်သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့သည်။ ဤခဏတာအမှန်တရား၏ခွန်အားအရဤခဏတာအနှောင့်အယှက်မရှိဖခင်နှင့်သူ၏ဖခင်၏နှလုံးသားထဲမှသူသည်ဝက်အတောထဲမှမိမိကိုယ်ကိုဆွဲထုတ်ကာအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ သူဖြစ်လာသည်အရူးနှင့်အရှုံးသမားနောက်တဖန်တက်ယူလိမ့်မယ်။
Ihr kennt den Rest der Geschichte – man findet sie in Lukas 15. Sein Vater nahm ihn nicht nur wieder auf, er sah ihn kommen, als er noch weit weg war; er hatte ernsthaft auf seinen verlorenen Sohn gewartet. Und er rannte, um ihn zu treffen, zu umarmen und ihn mit der gleichen Liebe zu überhäufen, die er immer für ihn gehabt hatte. Seine Freude war so gross, dass sie gefeiert werden musste.
နောက်အစ်ကိုတစ်ယောက်ကအစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့အဖေနှင့်အတူနေသူ၊ ထွက်ပြေးဖို့မပြေးသော၊ သူ့ဘ ၀ ကိုမလေ့လာခဲ့သူ။ ဒီအစ်ကိုကဒီအခမ်းအနားကိုကြားတဲ့အခါသူကအစ်ကို၊ အဖေကိုဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ထဲမဝင်ချင်ဘူး။ သို့သော်သူ၏ဖခင်သည်သူနှင့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးသူနှင့်စကားပြောသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်သူသည်သူ၏ဆိုးယုတ်သောသားကိုပြသခဲ့သည့်အတိုင်းအဆမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လည်းအတူတူဖြစ်သည်။
အစ်ကိုကြီးနောက်ဆုံးတော့အခမ်းအနားကိုဖွင့်ပြီးပါလာသလား။ ဒါကိုယေရှုမပြောခဲ့ပါဘူး သို့သော်သမိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားရန်လိုအပ်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သည့်အခါကမျှချစ်ခြင်းမေတ္တာမပျက်စေပါ။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောင်တရပြီးသူ့ထံပြန်လှည့်လာရန်တောင့်တသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းရှိ၊
သင်သည်ဘုရားသခင်ထံမှပြေး။ သူ၏အိမ်သို့ပြန်လာရန်အချိန်တန်ပြီလော။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားစုံလင်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းအားဖြင့်သူ၏လှပသောစကြဝuniverseာတွင်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်နေဆဲဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့ကိုပြန်လှည့်လာဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့ကိုဖြစ်တည်မှုအဖြစ်ခေါ်တော်မူစဉ်ကသူကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်သလိုယနေ့ငါတို့ကိုချစ်ဆဲငါတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ဖို့လိုသည်။